Smartwatches -ka ugu Fiican - Talooyin ku Saabsan Ragga Quruxda Badan | Ragga Caqliga leh
Alicia tomero | | nololeedka, fashion, Tiknoolaji, Isbeddellada
ka saacadaha dadka caqliga lihi waxay helayaan dhul dhammaan dadkaas oo u baahan inay iska fogeeyaan taleefankooda gacanta dhawr saacadood oo ay gacanta ku hayaan wax amaahiya shaqooyin badan oo ka mid ah. Maanta waxay ku horumareen boodbooyin iyo soohdimo, iyaga oo dejinaya hadafyo waaweyn waxaanan ku aragnaa horumarkooda sida soosaarayaashu u bilaabaan soo jeedintooda ugu wanaagsan suuqa.
Ogaanshaha kaas oo ah smartwatch -ka ugu fiican ayaa la gaari doonaa oo keliya baahida qof walba. Saacadda ugu fiican ayaa ka iman doonta gacanta oo bixiya faa'iidooyin badan, ugu dhammaystiran dhammaan safafka iyo kan khibradda u leh berrinka. Midka ugu quruxda badan ama ugu qaalisan annaga nagama mudna.
1 Maxay ii soo jeedin karaan saacadaha caqliga badan?
2 Saacadaha ugu wanaagsan ee caqliga badan
2.1 Taxanaha Apple Watch 6
2.2 Xiaomi my Watch Lite
Maxay ii soo jeedin karaan saacadaha caqliga badan?
Saacadahaan hadda uma fiicna kaliya sameynta cayaaraha. Waxay leeyihiin cibaaro lahaansho hawl qabad la'aan taasi waxay sahlaysaa inaanu jirin taleefankaaga gacanta oo aad ka dhex adeegsato. Nidaamkiisa bluetooth ayaa kaa dhigi doona inaad haysato waxay ku xirtay saacadda si wadajir ah moobil in aad jeebka ku haysan karto ama aad ku dhejin karto gacanta cududda.
Qaar ka mid ah taleefannada ayaa durba la yimid quirk awood ku dar kaarka SIM gudaha iyaga iyo sidaas taleefanka meel kasta uga tag. Astaamaheeda waxaa ka mid ah meelaynta GPS, ka -jawaabidda wicitaanka, muujinta farriinta, nolosha batteriga dheer, kormeeraha garaaca wadnaha, xusuusta muusigga, iska -caabbinta iyo inay ku dhex milmaan biyaha. Ugu yaraan kuwani waa astaamaha ugu muhiimsan. Marka xigta, waxaan arki doonaa kuwaas oo ah moodooyinka ugu fiican ee maanta ka jira suuqa.
Taxanaha Apple Watch 6
Waa mid ka mid ah iibiyaasha ugu wanaagsan waana mid ka mid ah kuwa ugu badan ee loo isticmaalo noocyada sumadda iPhone. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka jawaabto ogeysiisyada oo aad ku xirto Siri. Waxa ugu fiican ee saacadan waa 1.000 nit dhalaal sare taasi waxay kuu oggolaaneysaa shaashadeeda, inay awood u yeelato inay muuqato iyada oo aan dhib lahayn dharaar cad. Shaashaddaadu waxay leedahay cabbir 1.2 inji
Waxay kaa caawin doontaa inaad dabagal iyo tababar joogto ah samayso, ka jawaab fariimaha, qaado wicitaanada oo ogeysiiya shaqooyinka codsiyada kale. Waa biyuhu (ilaa 50 mitir)Waxay leedahay GPS iyo shil iyo dareeraha dhicitaanka. Qiimaheeda: waxyar ka badan € 400.
Saacadani waxay fulisaa ku dhawaad ​​dhammaan shaqooyinkii aad ka filan lahayd smartwatch. Waxay ku habboon tahay isboortiga sida dabaasha, socodka, orodka, treadmill, orodka raadadka, iyo baaskiilka. La soco garaaca wadnahaaga maalintii oo dhan oo uu leeyahay shaqada ee GPS. Shaashaddaada ayaa cabbiraysa 1.2 inji oo dhalaalaya 350 nits, waxayna leedahay cimri dherer batterigaaga ilaa 9 maalmood isticmaalka caadiga ah. Qiimaheedu waa qiyaastii € 50.
Waa saacad isboorti oo heer sare ah, ku habboon isboortiga, waqtiga firaaqada iyo waqtiga shaqada. Cabbir garaaca wadnaha 24 saac maalintii wuxuuna tirinayaa talaabooyinka maalinlaha ah ee la qaaday iyo kalooriyada gubatay. Shaashadiisu waa mid wareegsan oo sawirradeeda ku muujinaysa midab. Waxay leedahay hawl GPS ah, oo leh qalab silikoon oo heer sare ah iyo miisaan yar (25 garaam). Qiimuhu waa qiyaastii 280 XNUMX.
Bidix ilaa midig: Apple Watch Series 6, Xiaomi Mi Watch Lite, Garmin Forerunner 235
Saacaddan ayaa leh 1,6 inji shaashad wareeg ah, si sahlan loo akhriyo, oo leh GPS ku dhisan iyo leh codsiyo isku dhafan hawlaha kormeerka marka la ciyaarayo ciyaaraha. Waa biyuhu iyo waxaa lagu quusin karaa ilaa 50 m. Waxay ku xirmi kartaa taleefankaaga casriga ah (Android 4.4 iyo iOS 10.0 ama wixii ka dambeeya) waxayna heshaa oo dirtaa farriimaha. Shaqooyinka kale ee aan jecleyn ayaa ah inay leedahay cimri dherer 7 maalmood ah iyada oo aan la kicin GPS iyo waxaad ku bixin kartaa lacag la'aan. Qiimaheedu waa qiyaastii € 150.
Smartwatch -kan ayaa ah midka ugu qiimaha badan macaamiisheeda. Leedahay a 1.2 inji shaashad wareeg ah, oo leh iska caabin weyn oo culeyskiisu yahay 68 garaam. Waxay bixisaa awood weyn oo wax lagu kaydiyo, leh 4GB iyo 768 MB xasuusta iyo xawaaraha habaynta xogta sare.
Leh a is-maamul 144 saacadood ah waxayna la jaan qaadi kartaa Android iyo iOS. Hawlaheeda waxaa ka mid ah ogeysiisyada shabakadaha bulshada iyo awoodaan inaad hesho wicitaano. Waxa kale oo ay xambaarsan tahay shaqooyinka aasaasiga ah si loola socdo garaaca wadnaha, kharashyada kalooriga iyo ilaa 50 mitir biyaha hoostooda. Qiimuhu waa qiyaastii € 170.
Bidix ilaa midig: Garmin Vivoactive 3, Samsung Gear Sport, Xiaomi MI WATCH
Saacadani waxay leedahay mudnaanta in ay ku jirto qiimo wanaagsan waana saacad aad u fiican. Shaashaddaadu waa Wareegga 1.39 inji waxayna leedahay baytari leh a adkeysiga laga bilaabo 16 ilaa 22 maalmood, iyadoo ku xiran isticmaalkiisa weyn. Waxaa loo adeegsan karaa dhammaan shaqooyinka la socda jirka sidaas darteedna waxay ku habboon tahay isboortiga. Lagu quusin karo biyo ilaa 50 mitir iyo mid kale oo ka mid ah shaqooyinka soo jiita dareenka ayaa ah inay cabirto heerka oksijiinta ee dhiigga. Qiimaheedu waa qiyaastii € 100.
Smartwatch -ka ugu fiican wuxuu ku xirnaan doonaa dammaanadaha ay bixiso, baahida qofka iyo qaab nololeedkiisa. Saacadahaas Waxaa loo isticmaalaa in lagu daboolo baahiyaha aasaasiga ah ee casriga ah iyo inay awoodaan caafimaadka track marka ciyaaraha la ciyaarayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tiknoolaji » Saacadaha ugu wanaagsan ee caqliga badan
Astaamaha ugu muhiimsan ee sharabaadyada ragga